Mac App Store - Avy amin'ny Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 3)
Ny fandavana dia mamela antsika hisoroka ireo hira na mpihira izay tsy tianay indrindra amin'ny Spotify sy Apple Music
Misaotra ny fampiharana Denied, azonao atao ny manakana ireo hira na vondrona izay tsy tianao tsy lalaovina amin'ny Playlists sy ny Apple Music playlists
Ireo pejy, isa ary Keynote dia havaozina manampy fiasa vaovao
Apple dia namoaka fanavaozana vaovao an'ireo rindranasa rehetra izay ao anatin'ny iWork suite, izay ahitantsika ny Pejy, Nomery ary Keynote
Ankafizo billiard cushion XNUMX amin'ny Mac anao miaraka amin'i Carom Billiards
Raha te hankafy billiard misy ondana telo avy amin'ny Mac ianao dia afaka manao izany tsy misy olana amin'ny lalao Carom Billiards
Telegram Desktop izao dia mamela antsika hilalao horonantsary amin'ny alàlan'ny streaming
Raha ny mankafy ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram, ao amin'ny Mac App Store no ananantsika ...
Final Cut Pro, Motion, Compressor ary iMovie havaozina
Final Cut Pro, Motion, Compressor, ary iMovie dia novaina tamin'ny alàlan'ny fanamboarana bibikely sy ny fiovan'ny endrika horonan-tsary amin'ny endrika tohanana
xLine, ny fampiharana ny famoronana sarintany saina, lasa afaka tanteraka
Ny rindranasa hamoronana sarintany saina, hazo fianakaviana, kisary miasa ... xLine dia lasa maimaim-poana tanteraka amin'ny kininy ho an'ny iOS sy macOS.
Manaova kajy matematika amin'ny fomba tena tsotra sy intuitive miaraka amin'i Soulver
Raha mitady calculatera hafa ianao izay manome anao interface interface izay azonao tsara amin'ny voalohany, Soulver no fampiharana anao
Tehirizo amin'ny atiny PNG, JPEG na endrika PDF miaraka amin'ny Clipboard2Image ny votoatin'ny clipboard
Raha te hanova lahatsoratra manan-karena ho lasa sary isika, sary SVG na sary fotsiny dia mety ny fampiharana Clipboard2Imagen.
Ny mpanjifa mailaka Spark dia mamela antsika hanokana ny valin'ny mailaka
Ny mpanjifan'ny mailaka ho an'ny macOS, Spark, dia nohavaozina mba hanampiana fiasa vaovao ahafahantsika mandefa mailaka amin'ny olon-kafa.
Ny Seasonality Core dia mamadika ny Mac ho ivon-toetr'andro
Noho ny fampiharana ny toetrandro, Seasonality Core, azontsika atao ny mamadika ny Mac ho ivon-toetrandro feno indrindra eny an-tsena.
Ulysses 15 tonga miaraka amina varavarankely misy fizarana sy fitantanana teny fanalahidy
Ulysses 15 tonga miaraka amina varavarankely misy fizarana sy fitantanana teny fanalahidy ankoatra ny fanatsarana hafa. Afaka mizaha toetra an'i Ulysses 15 mandritra ny 14 andro isika
Telegram dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fandefasana horonan-tsary sy ny vaovao misimisy kokoa
Fampivoarana vaovao an'ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram izay manampy fampidinana tena horonan-tsary, ankoatry ny zava-baovao
Spark for macOS dia efa mamela antsika hamolavola ny lahatsoratr'ireo mailaka alehanay
Iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hitantanana mailaka, Spark, izay vao nohavaozina mamela ny famolavolana lahatsoratra.
The Sims 2: Pet Stories misy amin'ny euro 1 fotsiny amin'ny fotoana voafetra
Ny lalao The Sims 2: Pet Stories dia misy vetivety amin'ny Mac App Store amin'ny vidiny 1,09 euro fotsiny, vidiny ambany lavitra noho ny 21,99 izay ananany matetika.
Fafao mora foana ny zavatra rehetra amin'ny sarinao amin'ny Snapheal
Ny fanesorana zavatra avy amin'ny sary na famerenana amin'ny laoniny ny sary taloha dia tena mora tamin'ny fampiharana Snapheal Mac
Dropmark dia manampy antsika handamina ireo rohy, sary, pikantsary ary naoty amin'ny fomba tena tsotra
Ny fitantanana ny fampahalalana ilaina hanatanterahana tetikasa, asa na fandalinana dia tsotra be noho ny fampiharana Dropmark.
Lego the Incredibles no lalao manasongadina ao anatin'ny herinandro
Tsy isalasalana fa ny lalao LEGO The Incredibles dia mamela ny mpampiasa hanana fotoana mahafinaritra eo alohan'ny Mac. Amin'ity tranga ity, mandritra ity herinandro ity dia ity no lalao asongadina
Mamorona sary masina anao miaraka amin'ny Icon Plus, tsy misy afa-tsy amin'ny euro 1 mandritra ny fotoana voafetra
Ny fampiharana Icon Plus dia tsy misy vetivety amin'ny vidiny 1,09 euro fotsiny ary ahafahantsika mamorona sary masina ho an'ny Mac, fampiharana ...
Ireo mpandraharaha eropeana dia tokony hahazo 25.000 tapitrisa dolara hatreto noho ny App Store
Apple dia nitatitra fa, noho ny App Store, ireo mpandraharaha any Eropa dia mety hahazo mihoatra ny 25.000 tapitrisa dolara.
TweetDeck ho an'ny Mac dia nohavaozina amin'ny famahana ny fanjifana fahatsiarovana be loatra
TweetDeck ho an'ny macOS dia nohavaozina mba hampidirina amboarina ho an'ny bug lehibe izay nandany RAM be loatra.
Amidy i Luminar 3 hankalazana ny Andron'ny mpifankatia
Luminar 3 dia manolotra fihenam-bidy ho an'ny Andron'ny mpifankatia ary mandritra ny 5 andro manaraka. Araraoty ity tolotra ity
Pixelmator Pro dia nohavaozina afaka mitsabo sary mivantana avy amin'ny iPhone
Pixelmator Pro dia nohavaozina, afaka mitsabo sary mivantana avy amin'ny iPhone ary manasaraka ny sary amin'ny sarontava eo anelanelan'ny zavatra sy ny fototra.
Toolbox ho an'ny MS Office dia manome modely maro ho an'ny Office
Ny rindranasa Mac, Toolbox ho an'ny MS Office, dia manome modely maro ho an'ny Word, Excel ary PowerPoint.
Mijanona tsy mandeha amin'ny Mac intsony ny Apps On Sale
Ny fampiharana hitadiavana fampiharana maimaim-poana, miaraka amin'ny fihenam-bidy na koa ireo fampiharana vaovao izay miseho ao amin'ny App Store lamada Apps On Sale dia mijanona tsy mandeha
Maodely maherin'ny 3000 ho an'ny Microsoft Word amin'ny euro 1 fotsiny
Raha mitady modely ho an'ny Microsoft Word ianao, ny Templanes ho an'ny MS Word dia safidy mety indrindra handinihana maodely maherin'ny 3000 samihafa.
WidsMob, mpijery sary feno sy intuitive be
Raha mitady fomba hafa mahomby amin'ny Preview mba hankafizanao ny sary tianao indrindra, ny fampiharana WidsMob dia mety ho ilay fampiharana tadiavinao.
Ataovy amin'ny andrana ny fahaizanao ivelany miaraka amin'ny Rock Crawler
Ny lalao Rock Crawler dia manome andiana fiara maromaro handalo fitsapana 4x4 amin'ny karazana faritra rehetra.
Transitions DJ, mpamoaka feo mafonja ho an'ny Mac ary fitaovana tonga lafatra ho an'ny DJ izay azonao izao maimaimpoana
Jereo eto ny tetezamita DJ, tonian-dahatsoratra mahery vaika ary fitaovana tonga lafatra ho an'ny DJ izay misy maimaimpoana maimaimpoana izao.
myTuner Radio dia mbola iray amin'ireo fampiharana radio tsara indrindra ho an'ny Mac
Ao amin'ny Mac App Store dia hitantsika ny karazana fampiharana rehetra hihainoana ny radio ary myTuner Radio dia mbola iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ity
Jereo amin'ny fomba hafa amin'ny sarany Fragment ny sarinao
Raha mitady rindranasa hijerena ireo sary tianao indrindra ianao, ny Fragment no mety ho fampiharana maimaim-poana tadiavinao.
Makà sary avy amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny SnapMotion, tsy misy afa-tsy amin'ny euro 1 mandritra ny fotoana voafetra
Raha ny fitrandrahana sary avy amin'ny horonan-tsary tianay, sarimihetsika na karazana fitaovana audiovisual hafa, ao amin'ny ...
Ireo no kinova samihafa an'ny Office misy an'ny Mac
Ireo no kinova samihafa an'ny Office misy amin'ny Mac, hanampiana anao hisafidy izay mety indrindra amin'ny mpampiasa tsirairay.
Office 365 dia efa hita ao amin'ny Mac App Store
Ny orinasa Cupertino dia nanambara ora vitsy lasa izay ny fahatongavan'ny fampiharana Office 365 ao amin'ny Mac App Store amin'ny fomba ofisialy
Telegram dia havaozina amin'ny kinova 4.9 ho an'ny macOS
Miseho ho an'ny mpampiasa Telegram amin'ny macOS ny kinova vaovao 4.9 ary amin'ity fanavaozana ity dia ahitantsika fanatsarana mahaliana maro amin'ny resaka asa
Pixelmator Pro dia manampy saron-tava fametahana sary, fanamainana sosona voaatsara ary bebe kokoa amin'ny fanavaozana farany azy
Ny fanavaozana farany ny Pixelmator Pro dia manampy fiasa vaovao miaraka amina fonosana voarindra sy sarontava mba hanatsarana bebe kokoa ny zava-bita.
Telegram Desktop for Mac dia novaina tamin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fampiasa amin'ny vondrona
Ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram dia nohavaozina mba hanampiana fiasa vaovao amin'ny admin vondrona.
Fantaro haingana izay fanendrena anao manaraka miaraka amin'ny Fihaonana Manaraka
Misaotra ny fangatahana Netxt Meeting, ny fahafantarana ny ho fanendrena ho tetiandro manaraka dia tsotra be satria tsy mila mifanerasera amin'ny rindranasa rehetra izahay.
Fampiharana mahaliana sy vaovao handray naoty ao amin'ny Mac. Voamarika: naoty, mpitam-peo
Rindrambaiko vaovao handraisana naoty sy firaketana feo no tonga tao amin'ny Mac App Store antsoina hoe Noted: Notes, mpitam-peo izay ho mora kokoa ny mandray naoty
Apple dia namoaka ny kinova 10.4.5 an'ny Final Cut Pro X miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazany sy ny fitoniana
Apple dia namoaka ny kinova 10.4.5 an'ny Final Cut Pro X miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazany sy ny fitoniana. Final Cut Pro X dia mifanaraka amin'ny Mac rehetra
Mamorona karatra fiasanao manokana amin'ny InstaCard
Raha te-hamorona kara-pandraharahanao manokana ianao, miaraka amin'ny rindranasa InstaCard ho an'ny Mac dia azo atao ny manao azy mora foana.
Avadiho ho sary 3D ny sary fisaka miaraka amin'ny Easy 3D Scan
Ny famoronana sary 3D ho an'ny katalaogy na fivarotana an-tserasera dia dingana iray tena tsotra miaraka amin'ny fampiharana Easy 3D Scan, ary manampy ampiana hahafahana mivarotra ny vokarinay
Tantano ny Phillips Hue avy amin'ny Mac misy anao amin'ny Hue-topia
Raha te hahazo tombony betsaka amin'ny takamoa Phillips Hue ianao noho ny fampiharana Hue-topia Mac dia azo atao izany
Mamorona katalaogala mahavariana amin'ny Catalog Templates, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny Catalog Templates dia manolotra modely 40 izay ahafahantsika mamorona katalaoginy mahafinaritra hivarotra ny vokatra na serivisinay amin'ny fomba hita maso kokoa.
Miovaova eo anelanelan'ny endrika samihafa amin'ny fomba haingana sy mora amin'ny File Converter
Noho ny fampiharana File Converter dia afaka manova haingana sy mora eo anelanelan'ny endrika samihafa isika.
Raketo an-tsoratra izay rehetra aseho eo amin'ny efijery Mac anao miaraka amin'ny Screencast
Screencast dia rindranasa tsotra mamela antsika hanoratra izay rehetra aseho maimaimpoana amin'ny efijery Mac.
Lokoy loko, asongadino ny antsipirian'ny loko amin'ny sarinao
Amin'ity fampiharana vaovao ity dia hampiavaka anao ny sarinao rehetra noho ny mety hanisy loko amin'ny ampahany aminy
Ampitomboy ny traikefa AirPods amin'ny macOS miaraka amin'ny fampiharana ToothFairy
Ampitomboy ny traikefa AirPods amin'ny macOS miaraka amin'ny fampiharana ToothFairy. Ny fampiharana dia tompon'andraikitra amin'ny fanatsorana ny fizotry ny fifandraisana.
Apple hankalazana ny tsingerintaona faha-15 an'ny GarageBand amin'ny Alahady faha-6
Apple dia hankalaza ny faha-15 taonan'ny GarageBand amin'ny Alahady faha-6. Satria Apple dia nanao fandaharam-potoana manan-danja amin'ny fiainan'ny fampiharana.
Vikings - Wolves of Midgard, lalao iray izay manambatra ny angano sy ny tantara miaraka amina resaka nofinofy
Vikings - Wolves of Midgard dia manolotra tantara tany am-boalohany izay manambatra ny angano sy ny tantara miaraka amin'ny nofinofy nofinofy.
iSnapShot, fomba iray hafa handraisana pikantsary amin'ny Mac
Raha tsy maharesy lahatra anao ny fomba sy ny fanovana manaraka izay atolotry ny macOS antsika, dia ny fampiharana iSnapshot no ilay tadiavinao.
Telegram mahatratra ny kinova 4.8 miaraka amin'ny fanadihadiana sy ny vaovao hafa
Ny Enpass dia nohavaozina amin'ny andiany 6 miaraka amin'ny vaovao manandanja
Ny Enpass dia nohavaozina amin'ny kinova 6 miaraka amina fiasa vaovao manan-danja. Maody maizina sy vaovao maro kokoa, mifantoka indrindra amin'ny fiarovana ny teny miafina
Raise of the Tomb Raider tsy misy afa-tsy amin'ny 21,99 euro
Ny lalao farany amin'ny franchise Tomb Raider dia hita ao amin'ny Mac App Store miaraka amin'ny fihenam-bidy 10 euro amin'ny vidiny mahazatra.
Raha mitady rindrambaiko ianao hanatanterahana ny kajy matematika amin'ny endrika sary, ny Fractions Pro no fampiharana ilainao.
Raha mitady safidy hafa amin'ny VLC ianao dia afaka manararaotra ny fihenam-bidy natolotry ny fampiharana vGuru, fampiharana izay afaka mividy mandritra ny fotoana voafetra amin'ny vidiny 1,09 Euros fotsiny.
Mamorona antso an-tariby ho an'ny iPhone, na smartphone hafa miaraka amin'ny Ringtone Maker Pro
Noho ny rindranasa Ringtone Creator Pro dia afaka mamorona ringtone ho an'ny finday avo lenta amin'ny fomba tena tsotra sy haingana isika.
Fantastical 2 misy amin'ny antsasaky ny vidiny mandritra ny fotoana voafetra
Fantastical 2 ho an'ny Mac, misy amin'ny antsasaky ny vidiny, tolotra iray raha miandry azy ianao dia tsy tokony halahelo.
Acorn 6 Image Editor, dia fampiharana fanovana sary feno
Ao amin'ny Mac App Store dia mahita rindrambaiko vitsivitsy be izahay izay manampy anay hanitsy sary ary amin'ity ...
Swiftify ho an'ny Xcode, ahafahanao manova ny kaody Obective-C ho Swift 4.1 na 4.1 amin'ny tsindry iray
FX Photo Studio Pro, ento amin'ny ambaratonga hafa ity sarinao ity
Fantaro sy tantano ny loharano Mac anao amin'ny iStat Menus
Isaky ny manomboka malemy ny Mac antsika, na indraindray na tena matetika dia manomboka manome ...
Manaova sonia antontan-taratasy PDF sy maro hafa amin'ny Tiny PDF Editor
Noho ny fampiharana Tiny PDF Editor dia afaka manao sonia na manamarika an'izay rakitra amin'ny endrika PDF izahay
Asio fizarana lehibe ho kely kokoa miaraka amin'i Split
Ny fizarana rakitra ho kely kokoa dia asa tena tsotra noho ny fisarahana Split ho an'ny Mac.
Avadiho ireo rakitra audio amin'ny endrika misy amin'ny MP3 Converter Pro
Noho ny fampiharana MP3 Converter Pro dia afaka manova ireo rakitra audio amin'ny endrika hafa haingana sy mora foana isika.
Fileloupe - Media Browser, mpikirakira rakitra multimedia izay tokony ho ao an-tsainao
Fileloupe dia mpikaroka rakitra tsara natao ho an'ny rakitra multimedia.
Atambaro ireo rakitra PDF maromaro ho iray miaraka amin'ny Multge PDF Merge, izay misy mora kokoa izao
Jereo eto ny fomba ahafahanao manatevin-daharana rakitra PDF marobe ao anaty iray amin'ny alàlan'ny fampiharana Multiple PDF Merge ho an'ny Mac, mihena amin'ny Mac App Store.
Miteraha ny kaodinao manokana amin'ny Barcode Basics
Noho ny fampiharana Barcode Basics, afaka mamorona kaody barcode haingana sy mora izahay hitantanana ny lisitra, manamarina toetra ...
Volavola amin'ny Happy Holidaze ny paositry ny Krismasy anao
Raha te-hamolavola ny kaonty krismasy anao ianao dia misaotra an'i Happy Holidaze afaka manao izany haingana sy mora ianao.
Agenda, fampiharana hanatsarana ny famokarana miaraka amin'ireo naoninay
Tsy azonao atao ve ny manadio amin'ny labozia sarotra? Sasao, no vahaolana
Telegram Desktop dia havaozina miaraka amina asa vaovao
Andro vitsy lasa izay, ny mpiara-miasa amiko Jordi dia nampahafantatra anao ny fanavaozana ny fampiharana Telegram ho an'ny Mac, iray amin'ny ...
Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny manokatra fisie winmail.dat amin'ny Mac
Misaotra ny Winmail.dat Opener: fampiharana DAT Reader, afaka manokatra mailaka winmail.dat mora foana izahay
Mamorona hira mahafinaritra miaraka amin'ny Collage Maker
Ny famoronana collage avy amin'ny Mac anay dia asa tena tsotra noho ny fampiharana Collage Maker, rindrambaiko izay manome antsika zana-kazo sy fiaviana maro karazana hamoronana azy ireo.
Fantaro amin'ny fotoana rehetra ny vidin'ny Bitcoin noho ny Bitcoin Taskbar, azo alaina maimaim-poana
Jereo eto Bitcoin Taskbar, fampiharana iray maimaimpoana izao izay ahazoanao ny vidin'ny Bitcoin amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny bao menio macOS
Fanavaozana MacTracker amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo fitaovana sy rindrambaiko Apple farany
Telegram dia havaozina ho an'ny Mac manampy fanampiana amin'ny streaming video
Ireo no lalao sy fampiharana tsara indrindra ho an'ny Mac sy Apple TV amin'ny taona 2018
Vao nanambara i Apple izay lalao sy fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2018, na ho an'ny Mac na Apple TV.
Tonga injenieran'ny tetezana miaraka amin'ny Bridge Constructeur
Bridge Constructor dia lalao mampiankin-doha izay mamela antsika ho lasa injenieran'ny tetezana mandritra ny ora vitsivitsy.
Fantaro ny hafainganan'ny fifandraisanao amin'ity rindranasa ity
Noho ny fampiharana SpeedTest dia afaka fantatsika amin'ny fotoana rehetra hoe inona ny hafainganan'ny fifandraisanay amin'ny Internet avy amin'ny Mac.
Ahoana ny fomba hijerena ny habaka fanavaozana Mac App Store
Raha te hahafantatra izay toerana takiana amin'ny kapila mafy izahay hijerena raha afaka maka fampivoarana izahay na tsia, dia hasehonay anao ny fomba hahitana.
Defragment ary diovy ny kapila rehetra ao amin'ny macOS amin'ny Claymore-Shredder
Jereo eto Claymore-Shredder, fampiharana ho an'ny Mac izay ahafahanao mandoto sy manadio kapila kapila, miaraka amina fihenam-bidy ao amin'ny App Store.
Hizaha kaody QR miaraka amin'ny fakantsary Mac anao noho ny QR Journal
Noho ny fampiharana QR Journal dia afaka mamantatra kaody QR avy amin'ny Mac izahay miaraka amin'ny fakantsary iSight an'ny ekipantsika.
Mamolavola ny logo anao miaraka amin'ny Pro Logo Maker
Misaotra ny fampiharana Pro Logo Maker dia afaka mamolavola ny logo manokana ho an'ny vola kely lavitra noho ny lanin'ny mpandrafitra anay.
Video Converter Pro, mpanova horonantsary maimaimpoana ho an'ny Mac
Jereo eto Aiseesoft Video Converter Pro, mpanova horonan-tsary sy feo ho an'ny Mac maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra, ahafahanao manova endrika sy maro hafa.
Miverena mandefa azy amin'ny Mac misy sticky Notes
Noho ny fampiharana Sticky Notes dia azontsika ampiasaina indray ny post-its malaza avy amin'ny birao Mac.
Esory amin'ny alàlan'ny RAR Extractor Expert ny rakitrao voahidy
Raha mikasika ny famoahana rakitra amin'ny Mac, RAR Extractor Expert dia iray amin'ireo rindranasa maro ahafahantsika mamoaka rakitra voahidy.
Esory ny sary avy amin'ny sary tianao amin'ny Background Eraser
Ny famafana ny mombamomba ireo sary ankafizinay dia asa tena tsotra izay azonay atao haingana amin'ny fampiharana Background Eraser
Ankafizo hatramin'ny farany ny Netflix miaraka amin'ny iStream Player avy amin'ny Mac
Raha te hahazo tombony betsaka amin'ny kaontinao Netflix avy amin'ny Mac ianao, ny fampiharana iStream Player angamba no tadiavinao.
Fanavaozana vaovao ho an'ny Pixelmator Pro miaraka amina endrika vaovao maromaro
Fantaro amin'ny fotoana rehetra ny habaka apetrakao amin'ny fampiharana miaraka amin'ny Folder Watcher
Misaotra ny fampiharana Folder Watcher, afaka fantatsika amin'ny fotoana rehetra, inona ny toerana alain'ny folder miaraka amina hetsika mihetsika indrindra amin'ny kapila mafy ataontsika.
Ny Forecast Bar dia manampy ny bikan'ny menio sy ny dock application
Misaotra ny fampiharana Forecast Bar, azontsika atao ny manana ny mari-pana amin'izao fotoana izao ao amin'ny menio menu na ny application Dock izay havaozina amin'ny fotoana rehetra.
Jereo eto ny fomba ahafahanao mampifandray amin'ny alàlan'ny birao lavitra an'i Microsoft mankany amin'ny solosaina Windows avy amin'ny Mac.
2000 modely hamoronana karazana rakitra amin'ny euro 1 fotsiny
Infografika Prime dia nametraka modely maherin'ny 2000 tamin'ny ankamaroan'ny karazana fisie, ho an'ny 1 euro fotsiny.
Adobe Photoshop Elements 2019, azo alaina ao amin'ny Mac App Store ankehitriny
Grids, mpanjifa Instagram lehibe ho an'ny Mac
Jereo Grids ho an'ny Instagram eto, mpanjifa tambajotra sosialy Instagram maimaim-poana ho an'ny Mac misy fampiasa mahasoa maro sy famolavolana mahavariana.
Ahoana ny fomba hanokafana sy hamaha ny rakitra amin'ny endrika RAR amin'ny Mac
Jereo eto ny safidy efatra maimaimpoana tanteraka hanokafana na hamongorana ny fisie RAR avy amin'ny Mac tsy misy olana.
Miaraka amin'ny AutoMounter dia hanana ny mpamily tambajotra vonona hiasa foana izahay
Misaotra ny fampiharana AutoMounter afaka mifandray haingana sy mora amin'ny mpamily tambajotra haingana isika.
Dark Mode ho an'ny Safari dia ahafahantsika manova ireo tranonkala vangiantsika avy amin'ny fotsy ka hatramin'ny mainty
Misaotra ny maody maizimaizina ho an'ny fanitarana Safari afaka manova ny loko fotsy nentin-drazana an'ireo tranonkala vangiantsika ho mainty.
Mihaona amin'ny RAW Power 2.0 ho solon'ny fampiharana Photos
Mihaona amin'ny RAW Power 2.0 ho solon'ny fampiharana Photos. Ny fiasa dia azo ampiasaina amin'ny App na amin'ny fanitarana Photos for Mac
Tantano am-pitoniana ireo rakitrao amin'ny Browser X-ray
Misaotra ny fampiharana X-ray Browser dia afaka mitantana ny fisie ataonay amin'ny fomba tena tsotra izahay, mamela ny fetran'ny Finder
Tantano ny mailaka Gmail-nao avy amin'ny tsipika menio miaraka amin'ny MailTab
Misaotra ny MailTab ho an'ny Gmail, afaka mitantana ny kaonty mailaka Google izahay amin'ny alàlan'ny baran'ny menio ambony.
Evernote ho an'ny fanavaozana macOS amin'ny maody maizina
Ny evernote ho an'ny macOS dia novaina tamin'ny maody maizina amin'ny kinova 7.6, ary koa ny fampidirana fanatsarana ho an'ny fahazoana miditra
Final Cut Pro ho an'ny Mac dia novaina tamin'ny endrika vaovao maro
Final Cut Pro ho an'ny Mac dia nohavaozina miaraka amin'ny fiasa vaovao toy ny fanohanan'ny fanitarana ofisialy, fampihenana ny tabataba marani-tsaina ary maro hafa.
Manaova fanamarihana eo amin'ny efijery Mac anao mandritra ny fampisehoana miaraka amin'ny DemoPro
Noho ny fampiharana DemoPro, afaka manao an-tsoratra eo amin'ny efijery isika mandritra ny fampisehoana haingana sy mora foana.
Kiwi for Gmail for Mac dia havaozina ao anatin'izany ny sivana mba hahafahanao mandamina ny mailakao
Kiwi for Gmail for Mac dia nohavaozina vao haingana, mampiditra ny sivana ho zava-baovao, izay hahafahanao mandamina ny mailakao amin'ny fisafidianana.
Tantano amin'ny alàlan'ny yCalc amin'ny fomba tsotra sy tena hita maso ny kalandrie misy anao
Raha mitady rindranasa kalandrie ho an'ny Mac ianao, miaraka amina fiasa hita maso bebe kokoa, dia mety ho tena ilaina ho anao ny yCalc.
Photo Editor Movavi tsy misy afa-tsy amin'ny euro 1 ihany
Misaotra ny Photo Editor Movavi, azontsika atao ny manova ny sary ankafizinay araka izay tiantsika azy nefa tsy manana fahalalana manova.
Mamorona sy mampakatra ny bokinao manokana amin'ny Apple Books miaraka amin'ny iBooks Author
Apple dia manolotra antsika ny fampiharana iBooks Author izay ahafahantsika mamorona boky amin'ny fomba tena tsotra ary mampakatra azy ireo any amin'ny Apple Books
Manampia loko iray amin'ny sarinao miaraka amin'ny ColorStrokes
Misaotra ny fampiharana ColorStrokes, afaka manampy sy manaisotra ny loko misy ny sarinay izahay hahazoana valiny mahafinaritra.
Forecast Bar koa azo alaina ao amin'ny Apple TV
Tweetbot 3 ho an'ny Mac dia nohavaozina tamin'ny fanampiana GIF ary vaovao maro hafa
IconKit: ny rindranasa izay mamorona kisary ho an'ny rindranasao amin'ny vidiny mirary
Jereo eto IconKit, ny fampiharana ho an'ny macOS izay afaka mamorona sary masina ho an'ny rindranasa findainao haingana, ary amidy izany ankehitriny.
Apple manavao ireo fampiharana bundle GarageBand, iMovie, ary iWork amin'ny macOS
Apple manavao ny fampiharana suite GarageBand, iMovie, ary iWork ao amin'ny macOS, miaraka amin'ny fanatsarana ny fitoniana sy ny fahombiazany ary ny fanovana kely sasany
Telegram for Mac dia nohavaozina miaraka amin'ny maody maody maizina sy maro hafa ...
Mitadiava rakitra mozika manao dika mitovy amin'ny solo-sainao amin'ny Duplicate Music Cleaner
Fantaro hoe iza ireo rakitra mozika manao kopia ao amin'ny solosainao noho ny fampiharana Duplicate Music Cleaner.
Fantaro haingana ny tsingerin'ny volana miaraka amin'ny fampiharana Moon Phase
Raha te hahalala ny dingana isam-bolana isika ary rehefa mitranga izany dia misaotra ny fampiharana ny Moon Phase Mac dia afaka mamantatra izany haingana isika.
Mifantoha amin'ireo tena manan-danja amin'ny Window Focus ary manadino ireo fanelingelenana
Misaotra ny fampiharana Window Focus, tena afaka mifantoka amin'ny zava-dehibe isika rehefa miasa miaraka amin'ny Mac.
Artstudio Pro, safidy tsara hafa ho an'ny Pixelmator
Raha mitady safidy hafa amin'ny Photoshop na Pixelmator ianao, ny application Artstudio dia mety ho ilay fampiharana tadiavinao.
Quip, mpamoaka lahatsoratra hafa an'ny Mac izay tokony andramo
Jereo eto Quip for Mac, fitaovana iray handraisana naoty sy fiaraha-miasa amin'ny ekipa miaraka amina asa fanampiny maro izay ho hitanao fa mahasoa.
Ny fivarotana app Mac dia manala sokajy 11
Mamorona voatavo Halloween anao miaraka amin'ny Lab Pumpkin Jack
Ahoana ny fomba fanokafana rakitra miaraka amin'ny extension MAFF amin'ny macOS
Raha tsy fantatrao amin'izay rindranasa azonao atao ny manokatra rakitra amin'ny endrika MAFF, misaotra an'i Maff Viewer dia afaka manao azy haingana sy mora ianao.
Manampia endritsoratra vaovao amin'ny Mac misy an'ireto rindranasa telo ireto
Raha mitady endritsoratra ho an'ny tetikasanao ianao, etsy ambany dia asehonay anao ny fonosana 3 misy lohahevitra samihafa
Ataovy amin'ny sakafo fisakafoanana amin'ny kapila Disk Diet ny kapila mafy ataonao ary alao ny toerana ao amin'ny solosainao
Raha manana fitaovana mety isika, ny famotsorana toerana amin'ny kapila mafy ataontsika dia asa tena tsotra sy haingana miaraka amin'ireo fampiharana toa ny Disk Diet
Twitterrific for Mac dia manampy fanitarana hizarana atiny ho fanampin'ny vaovao hafa
Ny fanavaozana farany ny fampiharana Twitterrific ho an'ny macOS dia manome antsika ny fanitarana zaraina sy fomba maizina sy mazava vaovao izay miova ho azy.
Movaviera mpanadio rafitra, tsy misy afa-tsy amin'ny euro 1 amin'ny fotoana voafetra
Androany ianao dia afaka manararaotra ilay tolotra natolotr'i Movavi anay ary mividy ny System Cleaner, mpanadio kapila mafy sy mahomby.
Telegram dia havaozina amin'ny kinova 4.5
Amphetamine dia havaozina miaraka amina endrika vaovao sy asa vaovao
Misaotra ny fampiharana Amphetamine azontsika atao ny manana ny fitaovantsika hiambina foana tsy misy tahotra sao tsy hahita hetsika ny rafitra ary hametraka azy io amin'ny fampiatoana.
Ankafizo ny atlas amin'ny refy 3 miaraka amin'ny Earth 3D
Raha te hankafy atlas 3D amin'ny tontolo iray ianao, ny application Earth 3D no tadiavinao.
Pixelmator Pro izao dia manohana lohahevitra maizina sy maivana macOS Mojave
Ny fampiharana Pixelmator Pro ho an'i Max dia navaozina hanohana ny lohahevitra maivana sy maizina macOS Mojave.
Ataovy miavaka ny sarinao amin'ny Artistry Photo Pro amin'ny euro 1 fotsiny
Miaraka amin'ny Artistry Phot Pro dia azontsika atao ny manamboatra ny sarinay farafahakeliny amin'ny euro 1 fotsiny, raha manararaotra ny fotoana voafetra omena antsika
Ny rindrambaiko Mac App Store dia tsy ho ela dia tsy hisy
Araka ny azontsika vakiana amin'ny pejin'ny developer Apple, ireo fonosana fangatahana dia efa ho hita ao amin'ny Mac App Store
Ampifanaraho amin'ny lahatahiry ivelany ireo lahatahiry sy rakitrao noho ny Folder Sync 2
Maro amintsika no mpampiasa nandray ny serivisy fitahirizana rahona samihafa amin'ny tànana malalaka amin'ny ...
Hanova horonantsary fohy ho lasa endrika GIF miaraka amin'i Gifski
Ny fanovana ny clip avy amin'ny vidoe ka hatramin'ny gif dia dingana iray tena tsotra ary tsy misy fahasarotana noho ny fampiharana Gifski, fampiharana maimaim-poana azo jerena ao amin'ny Mac App Store
1Password dia mamela ny fandefasana teny miafina mandeha ho azy ao amin'ny macOS Mojave
1Password dia mamela ny fandefasana teny miafina mandeha ho azy ao amin'ny macOS Mojave. Ankehitriny ny fanamafisana ny teny miafina dia tsy maintsy atao tanana.
Ny mailaka dia havaozina mba hifanaraka amin'ny maody maizin'i macOS Mojave, ankoatra ny fanatsarana hafa
Fampivoarana ny mailaka hahafahana mandray maody maizin'ny macOS Mojave
Mamorona sary masina ho an'ireo rakitrao miaraka amin'ny Takoy Document
Ny fanaingoana ny kisary fampiharana ao amin'ny macOS dia dingana iray tena tsotra izay azontsika atao amin'ny fampiharana Takoy Document
Maneteza singa amin'ny sarinao amin'ny fomba tena tsotra amin'ny PhotoScissors 5
Ny fanapahana singa ao amin'ny sary ankafizintsika hanovana ny fototra na hanafoanana ireo singa tsy ilaina dia asa tena tsotra amin'ny PhotoScissors 5
Super Eraser: Photo Delete, nohavaozina amin'ny kinova 1.3.1
Esory ny tabataba amin'ny Noiseless
Noho ny fampiharana Noiseless dia azontsika atao ny mampihena ny tabataba amin'ny sary mandra-panjavonany.
Avadiho ny rakitra amin'ny endrika APE ho MP3 miaraka amin'ity rindrambaiko ity
Ny fanovana ny fisie avy amin'ny format APE ho MP3 dia dingana iray haingana be sy mora noho ny fampiharana APE ka MP3.
Mamorona collage amin'ny Mac anao amin'ny fomba tena tsotra amin'ny MagicCollage
Noho ny rindranasa MagicCollage dia afaka manamboatra sary mitambatra haingana sy haingana isika nefa tsy manova fahalalana.
MDEdit, safidy maimaimpoana ho an'ny mpanoratra iA
Raha mitady safidy hafa maimaimpoana ho an'ny mpanoratra iA ianao, MDEdit mety ho editor Markdown tadiavinao. Https://itunes.apple.com/es/app/mdedit/id892303043? Mt = 12 & ign-mpt = uo4
Manampia lahatsoratra amin'ny horonan-tsary tianao amin'ny Video Caption Maker
Garcías amin'ny fampiharana Video Caption Maker, afaka mampiditra lahatsoratra amin'ny horonantsary ankafizinay izahay nefa tsy mandalo editera sarotra.
Afangaroy sary roa miaraka amin'ny effets levona ary mamorona kompositions mahafinaritra amin'ny Image Mix
Miaraka amin'ny fampiharana Image Mix, afaka mampifangaro sary roa isika amin'ny alàlan'ny fampiharana ny effets levona amin'ny fomba tena tsotra sy haingana.
Ataovy miavaka tsara indrindra amin'ny Intensify ny sarinao
Misaotra ny fampiharana Intesify afaka mahazo tombony betsaka amin'ny sarintsika isika raha tsy manana fahalalana be momba ny fanovana.
Alamino amin'ny fomba tena tsotra miaraka amin'ny MarginNote ny fianaranao na ny tetikasanao
Raha mitady rindranasa handaminana ny antontan-taratasy rehetra amin'ny fianaranao na ny asanao ianao, MarginNote dia fampiharana izay tokony ho raisinao.
Avadiho ny PDF ho sary miaraka amin'ny PDF ho Image Star
Ny fanovana ny rakitra ao anaty endrika PDF izay misy sary ao anaty fisie sary dia dingana iray tena tsotra miaraka amin'ny fampiharana PDF mankany Image Star
Zahao ny atin'ny cache cache amin'ny Internet (Cache) Browser
Ny fidirana amin'ny cache amin'ireo fitaovantsika dia tsy dingana tsotra velively ary hankasitrahana amin'ny Browser fampiharana (Cache) Web
Amboary amin'ny tsipika miaraka amin'ny Image Crop ny sarinao
Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny sary maro dia asa tena tsotra amin'ny Image Crop
Telegram dia havaozina amin'ny kinova 4.4 miaraka amin'ny fanatsarana maro
PDF Expert dia mifanaraka amin'ny macOS Mojave izao
Ireo tovolahy ao amin'ny Readdle dia nanavao ny rindranasa PDF Expert nefa tsy nanampy ny maody maizina vaovao fa manatsara ny fifandraisany amin'ny macOS Mojave
Raha mitady kilalao tsindraindray ianao mba hankafizanao ny fotoananao, dia mety ho ny zavatra tadiavinao ny Puzzles fananganana lakandrano ao Aquavis.
Ankafizo ny Windows Solitaire mahazatra ao amin'ny Mac misy anao Solitaire
Raha te-hilalao ny Windows Solitaire mahazatra ianao, noho ny lalao h Solitaire azo alaina ao amin'ny Mac App Store, dia afaka mahatadidy ireo dingana voalohany izahay tamin'ny fikirakirana.
Iray amin'ireo lalao tsara indrindra nahavoa ny iOS App Store tato anatin'ny taona vitsivitsy, Alto's Adventure, izay tonga teo amin'ny Mac App Store
Afaka ora vitsivitsy dia hamoaka amin'ny fomba ofisialy i Apple ary ho an'ny rehetra, ny kinova farany an'ny macOS Mojave, ...
Esory haingana ny rindranasa napetraka ao amin'ny Mac With sensei Uninstaller
Raha tsy tianao ny fomba hamafana ny fampiharana ao amin'ny macOS, Uninstaller sensei no mety ho ilay fampiharana tadiavinao.
Ny lahasa CMD + Z ho an'ny fampiharana dia antsoina hoe AppBeBack
Raha zatra mampiasa ny lahasa CMD + Z ianao amin'ny fampiharana rehetra, noho ny AppBeBack, azonao atao ny manitatra ny fampiasana azy rehefa manokatra rindranasa vao nikatona ianao
Jereo ny karazana fisie misy an'i XView 3
Noho ny rindranasa XView 3 dia azontsika atao ny miditra amina rakitra sy endrika marobe izay azontsika jerena amin'ny fampiasana rindrambaiko iray ihany.
Pixelmator Pro dia mbola misy amin'ny vidiny antsasany
Ny rindrambaiko fanovana matihanina Pixelmator Pro dia azo vidiana amin'ny antsasaky ny vidiny mahazatra, fotoana mety tsara hanararaotana.
Duplicate File Doctor dia hanampy antsika hanafoana ireo rakitra duplicate amin'ny solosainay
Raha mitady rindranasa hikaroka rakitra dika mitovy amin'ny Mac ianao, Duplicate File Doctor dia safidy tsara dinihina.
Ataovy manokana ny antontan-taratasinao miaraka amin'ny sary maherin'ny 2.000 amin'ny 1 euro fotsiny
Raha mitady maodely PowerPoint ianao ankoatry ny sary marobe mba hampiavaka anao manokana ny antontan-taratasinao, ny Infographics Templates dia mety ho ilay app tadiavinao.
iWork ho an'ny macOS dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao marobe
Miaraka amin'ny fandefasana kinova macOS vaovao, Apple manavao ny efitrano fiasan'ny birao iWork, hampifanaraka azy ireo amin'ireo fiasa vaovao azo avy amin'ny tanan'ny macOS.
Apple dia namoaka kinova 12.0 an'ny Safari for Mac
pple dia mamoaka ny kinova 12.0 ho an'ny Mac miaraka amina fiasa vaovao manan-danja mifandraika amin'ny fiarovana, fanatsarana ary fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa.
Manaova lisitra, safidy hafa tsy mahaliana kokoa hamoronana lisitra ao amin'ny Notes
Raha efa nitady fomba hafa hisolo ny fampiharana Notes ianao dia manaova lisitra izay fampiharana tokony hoeritreretinao noho ny isan'ny fiasa atolotra antsika.
Miaraka amin'i Atento, ho fantatsika ny fomba fampiasantsika ny fotoanantsika eo alohan'ny Mac
Misaotra ny fampiharana Atento, araky ny anarany, mamela antsika hitandrina amin'ny fotoana ampidirantsika vola amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny rindranasa na pejy web izay tsidihinay.
Mora mamorona fampisehoana amin'ny endrika rehetra miaraka amin'ity rindranasa ity
Raha matetika ianao dia mila manao famelabelaran-kevitra fa tsy anao PowerPoint, ity fampiharana ity dia hahafahanao manova ny rakitra PowerPoint
Adinoy ny momba ny mpanara-dia raha mizaha miaraka amin'ny Ka-Block
Raha mitady rindrambaiko ianao hisorohana ny fanarahan-dia mitohy ataon'ny tranokala sasany, Ka-Block, fampiharana maimaim-poana, dia mety ho ilay tadiavinao.
Avadiho ary esory mora ny audio amin'ny The Audio Converter ho an'ny macOS
Avadiho ary esory mora ny audio amin'ny The Audio Converter ho an'ny macOS. Ity rindranasa ity dia mamadika ny fisie amin'ny mpizara an'ny developer.
Ampio ny fiovaovan'ny pejy ny sarinao miaraka amin'ny Page Turn Effect
Raha te-hamorona ny vokany ianao hamadihana ny pejy mora sy haingana amin'ny sarinao, noho ny fampiharana Page Turn Effect, vitantsika izany.
Ovao ny haben'ny sarinao, avadiho amin'ny endrika hafa izy ireo ary bebe kokoa amin'ny ImageSize
Misaotra ny fampiharana ImageSize, azontsika atao ny manova sary, manome anarana azy ireo ary manova ny famahana azy ireo mora foana.
Makà pikantsary pejin-tranonkala amin'ny WebShot Pro
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nikasa ny haka pikantsarin'ny browser-nao, ...
Manampia lahatsoratra amin'ny sarinao miaraka amin'ny Fontography, azo alaina amin'ny 1 euro fotsiny
Rehefa manampy lahatsoratra amin'ny sarintsika, raha tsy te hampiasa Photoshop na Pixelmator isika, Fontography dia fitaovana tena tsara hikajiana.
Ampitomboy ny famokaranao amin'ny voatabia - fitantanana fotoana
Raha ny mipetraka eo alohan'ny Mac, azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha, nanapa-kevitra ny hanao ...
Adware Doctor for Mac voampanga ho nahazo ny angon-drakitra mpampiasa
Adware Doctor voampanga ho nahazo ny angon-drakitra mpampiasa
Pixelmator koa dia amidy mandritra ny fotoana voafetra
Iza amin'ireo nanatrika teo no tsy mahalala an'ity fitaovana fanovana ity? Azo antoka fa fantatsika rehetra izany satria mampiasa azy io na ...
Pixelmator Pro dia nohavaozina amin'ny kinova 1.1.4 ary mampihena ny vidiny efa ho antsasaky ny vidiny
Androany isika dia mahita vaovao tsara ho an'ireo izay maniry fampiharana fanovana sary mahafinaritra. Herintaona taty aoriana ...
Ataovy amboary ny labozonao amin'ny E Element Lab
Rehefa mamorona antontan-taratasy, isaky ny azo atao, ny fampidirana sary na sary dia hahatonga ny famakiana ho mahafinaritra kokoa, raha mbola ny Thanks to the Elements Lab fampiharana, azontsika atao ny manavaka ireo antontan-taratasintsika miaraka amina sary sokajiana maro isan-tsokajy.
Manafainganana ny fikarohana amin'ny Internet miaraka amin'i Haste
Raha mikasika ny fikarohana amin'ny Internet dia manana mpanamory maro be izahay amin'izao fotoana izao. Eny, mazàna tsia Noho ny fampiharana Haste, afaka mikaroka Internet haingana sy mora isika nefa tsy mila manokatra browser foana.
Manampia tsipika mainty amin'ny sary mora foana amin'ny Black Out
Raha ny fanovana sary, amin'ny fomba tsotra sy tsy sarotra, Preview, ampidirina anaty macOS, no iray amin'ny tsara indrindra Raha matetika ianao no liana amin'ny fandrakofana ny ampahany amin'ny sary apetranao amin'ny tambajotra sosialy na zarain'ny media hafa, Black Out dia mety hanampy be.
Ny fanavaozana ny Skype farany dia ahafahantsika manoratra antso
Skype dia nanjary tato anatin'ny taona vitsivitsy, tamin'ny fomba nety ho an'ny mpampiasa an-tapitrisany maro rehefa manao antso amin'ny firenen-kafa, hatrany Ny fanavaozana farany ny Skype dia mamela antsika hanoratra ireo antso ataontsika amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fomba mahazatra.
Avadiho ny rakitra famafazana amin'ny endrika hafa miaraka amin'ity rindranasa ity
Ao amin'ny Mac App Store dia afaka mahita rindrambaiko marobe isika ahafahantsika manao asa saika. Raha tsy izany no izy, azontsika atao Raha matetika ianao no mila manova ny takelaka amin'ny endrika hafa, ny fampiharana Spreadsheet Converter dia mety ilay fampiharana ilainao
Avadiho ireo rakitra SVG ho JPG, PNG, PDF ... miaraka amin'ny SVG Converter
Ny fisie amin'ny endrika .SVG dia nanjary tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny be mpampiasa indrindra amin'ny pejin-tranonkala marobe, indrindra ireo izay misy azy ireo. Misaotra ny fampiharana SVG Converter, afaka mamadika haingana ireo karazan-drakitra ireo ho endrika mifanentana kokoa toa ny JPEG izahay, PNG, TIFF
Alao ny horonan-tsary tianao amin'ny SnapMotion
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha, nandefa horonantsary izahay fa tsy naka sary vetivety izay tianay nalaina tamina fomba iray. Ny fahazoana sary an-tsary karazan-tsary dia asa tena tsotra miaraka amin'ireo rindranasa toa ny SnapMotion
MacTracker dia nohavaozina miaraka amin'ny MacBook Pro 2018 vaovao sy ny fanatsarana hafa
Ny fanavaozana farany ny fampiharana MacTracker fanta-daza, dia manome antsika ny fampahalalana feno momba ny MacBook Pro vao navoaka vao ...
Manaingo ny rindranasa izay manome anay ny fampiasa Split View maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ity dia iray amin'ireo fotoana izay maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ity fampiharana ity ary ...
Apple hamoaka fanitarana sary ho an'ny fanontana album
Tamin'ity herinandro ity dia nampandre anay mpampiasa i Apple fa indraindray dia naniraka azy ireo hanonta sary, rakipeo na kalandrie tamin'ny alàlan'ny Apple izahay, dia manolo ny fanontana ny rakikira miaraka amin'ny serivisy antoko fahatelo ao anaty Photos. Mianara misintona fanitarana efa misy.
vGuru Video Player, safidy hafa aloa amin'ny VLC
Rehefa misafidy mpilalao horonantsary ianao, arakaraka ny safidintsika rehefa mametraka rindranasa (avy amin'ny Mac App Store na avy amin'ny Raha mitady vahaolana hafa amin'ny VLC ianao, vGuru no mety ho ilay fampiharana tadiavinao, raha toa ianao ka mametaka fampiharana avy amin'ny Mac App Store
Video Plus - Movie Editor, tsy misy afa-tsy 1 euro amin'ny fotoana voafetra
Raha ny fanovana ny horonantsary ankafizinay, ary raha mbola te hanao asa tsara amin'ny fanovana izahay dia manolotra anay iMovie i Apple. Raha mitady mpampanonta horonantsary tsotra ianao, izay ahafahana manitsy ny soatoavina fototra, angamba ny Video Plus - Sarimihetsika Tonian-dahatsoratra no tadiavinao
Manova sy mamaky rakitra amin'ny endrika PDF miaraka amin'ny PDF Office amin'ny euro 1 monja
Raha matetika isika miasa amin'ny rakitra amin'ny endrika PDF, dia azo inoana fa mila manitsy ilay rakitra hafahafa isika ...
Afaka ny mpamaky RSS RSS Reeder 3 malaza
Ny mpamaky ny vaovao na ny famoahana dia tena nahomby taona maro lasa izay. Ity dia fomba iray hampahafantarina anao ny serivisim-baovao ataonao, na ny safidinao ny mpamaky RSS Reeder 3 malaza dia lasa afaka amin'ny fanavaozana anio. Toa tapaka ny fampiharana.
Mamorona taratasim-baovao matihanina mifanaraka amin'ny fitaovana finday sy birao miaraka amin'ny Mail Designer
Raha manana ny lisitry ny mailaka ifandraisantsika tsy tapaka amin'ny alàlan'ny taratasy fampahalalana momba ny fampiroboroboana na tolotra Mamorona modely mahafinaritra handefasana newsletter miaraka amin'ny Mail Designer 365
Curiota, safidy mahaliana hafa hitehirizana naoty, fisie ...
Raha ny famoronana naoty, dia maro ireo mpampiasa mampiasa ny fampiharana teratany mitovy anarana aminy, fampiharana ahafahantsika mifangaro ao Raha mitady rindranasa hamoronana naoty sy fampifanarahana rakitra ianao, ny fampiharana Curiota dia safidy tsara indrindra ho an'ireo lehibe toa an'i Evernote.
Screen recorder, safidy iray hafa amin'ny QuickTime hanoratra ny efijery an'ny Mac
Raha mikasika ny fandraisam-peo ny efijery an'ny Mac antsika, mandritra ny 3 taona dia manolotra antsika i Apple fa tsy mila manararaotra ny fangatahana raha mitady vahaolana hafa izay mora ampiasaina kokoa noho ny QuickTime ianao, ny Screen Recorder no mety ho fampiharana ilainao.
Avadiho amin'ny boky elektronika miaraka amin'ny The Ebook Converter ny rakitra rehetra
Na dia tsy sahy mampiasa ny fampiharana iBook aza ny mpampiasa sasany, na amin'ny Mac na amin'ny iPhone na iPad, dia tsy maintsy ekena fa io no fomba tsara indrindra hanovana rakitra na sary amin'ny endrika boky elektronika, asa tena tsotra miaraka amin'ny The Ebook Converter
Alefaso amin'ireto endritsoratra sci-fi ireto ny fisainanao
Rehefa mamorona karazana rakitra, arakaraka ny tanjony, bokikely fanaovana dokam-barotra, fampisehoana, karatra fandraharahana ... Misaotra ny macFonts Sci-Fi ananantsika fonosana fonosana miaraka amina karazana litera maherin'ny 4.000 amin'ny 5 euro mahery fotsiny. .
Sokafy ny fampiharana tianao amin'ny alàlan'ny hitsin-dalana sy ny app Thor
Ny dock application izay macOS dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra anananay mba hanampiana hitsin-dàlana ho an'ny rehetra Misaotra ny fampiharana Thor, afaka mihazakazaka haingana ny rindranasa ankafizinay mivantana miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry.
Makà maodely maherin'ny 300 ho an'ny Excel amin'ny euro 1 fotsiny
Rehefa mamorona antontan-taratasy avy hatrany am-boalohany, raha tsy dia mazava loatra ny zavatra tiantsika hatao, dia azo inoana fa hijery ilay antontan-taratasy ao amin'ny Templates for MS Excel manolotra antsika mandritra ny fotoana voafetra mihoatra ny 300 modely ho an'ny 1,09 euro fotsiny.
Ny mpanjifa mailaka Spark dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao manandanja
Na dia marina aza fa ho an'ny mpampiasa maro, ny fampiharana mailaka tompon-tany dia mihoatra ny ampy hitantanana ny mailaka isan'andro, ho an'ny mpampiasa hafa Ny mpanjifa mailaka Spark dia vao avy nahazo fanavaozana manan-danja izay nanampiana safidy marobe, ny sasany amin'izy ireo dia andrasan'ny mpampiasa fatratra.
DiRT Rally dia misy amin'ny Mac App Store amin'ny vidiny 17,99 monja amin'ny fotoana voafetra
Na dia toa tsy mahasarika mpamorona marobe aza ny sehatr'asan'i Apple noho ny fetran'ny sary, isaky ny indray mandeha raha toa ka manantena ny hidina DiRT Rally amin'ny Mac App Store ianao, dia tsara vintana ianao toy ny nandritra ny andro vitsivitsy. afaka mahazo izany amin'ny antsasaky ny vidiny isika
Mamorona GIF haingana miaraka amin'ny Builder iGIF
Andro vitsy lasa izay dia niresaka momba ny fampiharana iray izahay, izay tsy misy sarany 1,09 euro fotsiny, fampiharana iray ahafahanay manao zavatra isan-karazany. Raha efa nieritreritra momba ny hevitra fanaovana GIF amin'ny horonan-tsary ianao nandritra ny fotoana kelikely , miaraka amin'ny iGIF Builder dia azonao atao amin'ny fomba haingana sy mora izany.
Tweetbot dia havaozina miaraka amin'ny fameperana fampiasana tsy ho ela ho an'ny Mac
Ny kinova vaovao an'ny fampiharana ho an'ny mpampiasa iOS dia efa manampy vaovao mametra noho ny ...
Hamafiso ary esory ny zavatra avy amin'ny sarinao amin'ny Super Eraser Pro
Ny app Super Eraser Pro dia amidy amin'izao fotoana izao sy amin'ny fotoana voafetra, hahafahanay ...
Elmedia, mpilalao amin'ny endrika video sy audio hafa
Raha hampiasa mpilalao video mba hankafizantsika ireo horonan-tsary na sarimihetsika ankafizinay, ny safidy tsara indrindra anananay eo amin'ny tsena isan'andro ho an'ny Elmedia Player dia mpilalao horonantsary tsara indrindra ho an'ny Mac, azo jerena ao amin'ny magazay fangatahana, ary manolotra maro be izahay fiasa
Avadiho mora foana ireo video ho lasa GIF miaraka amin'ny mpamorona Video GIF
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, mpampiasa maro no nanomboka nampiasa rakitra GIF ho fomba mahazatra hanehoana ny lahatsarin'izy ireo. Ny fanovana horonantsary na andian-tsary amin'ny endrika GIF dia dingana iray tena tsotra izay azontsika atao amin'ny mpamorona Video GIF.
Matory Miaraka Amiko, fampiharana izay manampy anay hampifandray ny Mac
Ity dia fampiharana izay tonga tao amin'ny Mac App Store tamin'ny volana Jona lasa teo ary ...
Mora mamorona brochure, calendars, form, labels, ary bebe kokoa amin'ny Business Print Lab
Rehefa mamorona antontan-taratasy vaovao, arakaraka ny fahalalana ananantsika momba ireo rindranasa ampiasaintsika matetika, dia azo inoana fa ny asan'ny Thanks to the Business Print Lab application, dia afaka mamorona karazan-drakitra ilaintsika nefa tsy mila miatrika ilay lamba fotsy. tsy manome aingam-panahy antsika mihitsy izany.
IGTV ho an'ny Instagram dia azo alaina ao amin'ny Mac App Store
Tamin'ny volana jona lasa teo, ny fampiharana amin'ny fahitalavitra Instagram, antsoina koa hoe ...
Sasao, ahenao indray ny vidinao mandritra ny fotoana voafetra
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny fampiharana Wash dia nampidina ny vidiny nandritra ny fotoana voafetra ary niverina izao ...
Mamorona sary masina mahatalanjona amin'ny Icon Plus
Raha ny momba ny fanaovana sary masina, na ho an'ny rindranasa na hampidirina amina endrika sary sasany, dia tsy nisy tsotra toy ny tamin'ny fampiharana Icon Plus na ny mpamorona na ny mamorona sary masina ho an'ny iOS sy macOS.
Manomeza toerana malalaka amin'ny Mac anao amin'ny Disk Care mandritra ny 1 euro fotsiny
Betsaka ny mpampiasa izay manao vakansy na efa hankafy azy ireo ankehitriny. Mandritra ny fialantsasatra dia maro no ho mpampiasa Mampiala ny habaka amin'ny kapila mangirana ao amin'ny Mac misy dingana iray tsotra be noho ny rindranasa toa ny Disk Care, fampiharana izay mandeha ho azy.
Amboary ny fisie amin'ny endrika PDF miaraka amin'ny PDF Office, tsy misy afa-tsy 1 euro fotsiny
Raha miasa miaraka amina rakitra amin'ny endrika PDF isika matetika dia mety efa manana rindranasa mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika rehetra. Raha tsy izany, anio noho ny fisoratana anarana amin'ny Office PDF, tsy vitan'ny hoe manokatra antontan-taratasy amin'ny endrika PDF ihany izahay, fa afaka manitsy azy ireo koa, mameno endrika, mamantatra lahatsoratra avy amin'ny sary ...
Sketch Art Pencil Drawing, fampiharana hanomezanao fikitika hafa ny sarinao
Amin'ity tranga ity dia hizara fampiharana aminareo rehetra avy amin'ny Mac App Store izahay izay mamela anay ...
Raketo an-tsoratra ny écran Mac-nao amin'ny Movavi Screen Recorder, amidy amina euro 1 fotsiny
Rehefa mandrakitra ny efijery an'ny Mac antsika, Apple dia manome ny fampiharana QuickTime ho antsika, fampiharana tafiditra an-tanindrazana ao amin'ny Thanks to the Movavi Screen Recoder application, azontsika atao ny manoratra ny efijery an'ny Mac antsika amin'ny alàlan'ny fanamboarana toerana maro be, zavatra izay tsy azontsika ataovy amin'ny QuickTime.
Tantano amin'ny fomba tsotra amin'ny Filepane ny fisie amin'ny macOS
Na dia marina aza fa manome be dia be ny lahasa ho an'ny Finder ho antsika, maro amin'izy ireo dia tsy an'ny macOS ihany, azo antoka fa ny sasany aminareo Misaotra ny fampiharana Filepane, ny safidy azontsika ampiasaina rehefa mitantana rakitra amin'ny macOS dia mihabetsaka tokoa
Bitcoin Monitor X, araho ny fandrosoana mivantana ataon'ny Bitcoin amin'ny Mac anao
Ary manana rindranasa vitsivitsy be dia be izahay izay mamela anay hanaraka ny vidin'ny ...
Avadiho haingana eo anelanelan'ny endrika sary samihafa amin'ny Creative Converter
Raha ny fizarana sary amin'ireo namantsika sy fianakaviantsika dia azo inoana fa ny sasany amin'izy ireo, na isika aza, dia tsy manana ilay rindranasa ananantsika Misaotra ny fampiharana Creative Converter, afaka miova haingana isika ary tsy mampiasa PSD tany am-boalohany, Fampiharana EPS sy Ai mankany JPG, TIFF, BMP, PNG
Voice Recorder, fampiharana vaovao handraisana feo
Ao amin'ny magazay fampiharana Mac dia manana rindrambaiko maromaro izahay izay mikendry mivantana amin'ny fandraisam-peo sy ...
Manampia mari-drano, aondraho ny fiaviana, ampio sivana ary maro hafa miaraka amin'ny Image Plus
Raha ny fanovana ny sary ankafizinay indrindra, indrindra fa amin'izao fialantsasatra izao dia misy mpampiasa marobe mitady. Misaotra ny fampiharana Image Plus, afaka manitsy ireo sary ankafizinay izahay amin'ny dingana vitsivitsy monja.
Mamorona antontan-taratasy mahavariana miaraka amin'ny Infographics Maker
Raha matetika isika no voatery mamorona antontan-taratasy avy am-boalohany, na fampisehoana ireo, soratana hizara amin'ny olon-kafa, asa avy amin'ny Infografika Maker, dia mametraka sary marobe isan-karazany amin'ny alalàntsika izy ahafahantsika manamboatra antontan-taratasy rehetra tsy manam-petra, ary mihoatra ...
Fantastical for macOS dia nohavaozina amin'ny kinova 2.5 miaraka amin'ny vaovao manandanja
Rehefa nieritreritra izahay fa ny vaovao tamin'ny rindrambaiko dia vita hatramin'ny volana septambra, ny bandy ao amin'ny Flexibits dia namela ny entimodiny vita alohan'ny fanavaozana ny Fantastical for macOS ho an'ny andiany 2.5 miaraka amin'ny vaovao manandanja, toy ny fanolorana fanovana amin'ny hetsika iray na fisoratana anarana hihaonana. Com
Arena: Galaxy Control, lalao MOBA tena tsara
Raha te hankafy lalao MOBA ianao dia angamba Arena: Galaxy Control, lalao iray izay toa tsara ho an'ireo tia an'ity karazana lalao ity.
Ny Twitterrrific dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fiasa hifanaraka amin'ny fitakian'ny Twitter
Nohavaozina ny Twitterrrific amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fiasa hanatanterahana ny fitakian'ny Twitter, ao anatin'izany ny fampandrenesana Push sy ny fandefasana mivantana
Esory ireo rakitra mitovy dika mitovy amin'ny Doplicate File Doctor
Raha mila manafaka toerana amin'ny kapila mangirana isika, ny iray amin'ireo safidy tsy maintsy raisintsika dia ny fitadiavana rakitra mitovy dika mitovy aminy.
Telegram ho an'ny Mac dia efa mamela antsika hanisy chat rehefa vakiana
Ny kinova Telegram ho an'ny Mac dia nohavaozina ary nanampy fiasa iray ahafahantsika manisy resaka na chat rehefa novakiana nefa tsy niditra tamin'izy ireo
Makà diagnostika famantarana ny aretinao amin'ny Health Check
Noho ny fampiharana Health Check dia afaka mahazo lisitra haingana momba ny niandohan'ny soritr'aretina izay iaretantsika izahay.
Mamorona antontan-taratasy ao amin'ny PowerPoint miaraka amin'ity andiana modely ity
Noho io fampiharana io dia afaka mamorona karazana rakitra amin'ny endrika PowerPoint izahay.
Ny Glyph Icon Collection dia mametraka am-peo kisary 1000
Misaotra ny fampiharana Glyph Icon Collection, afaka miditra haingana sy mora amin'ny sary vector 1000 izahay
Pixelmator dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanana amin'ny fanondranana rakitra amin'ny endrika HEIF
Ny fanavaozana farany ny Pixelmator dia ahafahantsika manondrana sary amin'ny endrika HEIF mba hampihenana ny habaka
Telegram for Mac dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana maro sy maody maizina ho an'ny Mojave
Satria ny fangatahana dia ao amin'ny crosshairs an'ny manampahefana rosiana, ny marina dia tsy nanana ...
Malalaka indray mandritra ny fotoana voafetra Super Eraser ho an'ny Mac
Miatrika rindranasa iray izahay izay mazàna amin'ireo voafantina hanafoana ireo singa tsy ilaina ao amin'ny sarinay ary ankehitriny ...
Mamorona sary famantarana matihanina miaraka amin'ny Logo Lab ho an'ny iWork
Ny famoronana logo ho an'ny orinasa dia dingana iray tena tsotra ary ambonin'izany rehetra mora vidy izany, miaraka amin'ny fampiharana Logo Lab ho an'ny iWork
PDFZone, ilay rindrambaiko hanovozana angona avy amin'ny PDF, dia havaozina amin'ny kinova 2.0
PDFZone, ilay rindrambaiko hanovozana angona avy amin'ny PDF, dia havaozina amin'ny kinova 2.0, miaraka amin'ny fiasa hanangonana vaovao avy amin'ny PDF ho an'ireo tahiry
Zahao hoe aiza ny fandefasana anao miaraka amin'ny fampiharana iTracking ho an'ny macOS
Zahao hoe aiza ny fandefasana anao miaraka amin'ny fampiharana iTracking ho an'ny macOS, miaraka amin'ny ankamaroan'ny orinasam-pitaterana erak'izao tontolo izao.
Kingpin Web Browser dia mpitety tranonkala misy adblock sy mode incognito foana
Ny tranokalan'ny Kingpin Web Browser dia manolotra aminay ny maody fanaovana «incognito» namboarina ho zanatany ho fanampin'ny mpanakana doka.
GarageBand sy Final Cut Pro dia havaozina amin'ny fiasa vaovao
Roa amin'ireo fangatahana kintana an'i Apple, GarageBand ary Final Cut Pro no nahazo ny fanavaozam-baovao mifanaraka amin'izany dia vaovao lehibe
Keka, compresseur fisie matanjaka sy tsotra
Betsaka ny rindranasa ananantsika ao amin'ny Mac App Store ary rehefa mijery ireo fitaovana ho an'ny ...
Manaova fanamarihana ao amin'ny Safari miaraka amin'ny fampiharana Highlighter ho an'ny macOS
Manaova an-tsoratra ao amin'ny Safari miaraka amin'ny app Highlighter ho an'ny macOS, toy ny fanoritana ny tsipika na ny fametrahana Post-it amin'ny tranonkala, izay itoerany
Fafao rakitsary mozika dika mitovy amin'ny Mac amin'ny Duplicate Music Cleaner
Navoaka tao amin'ny magazay Mac ny fampiharana Duplicate Music Cleaner ary manolotra ny mpampiasa…
Ampitao ny habaka apetraky ny sarinao fa tsy manary kalitao amin'ny JPEG Jackal
Misaotra ny fampiharana JPEG Jackal, azonay atao ny manery ny habaka izay alain'ireo sarinay amin'ny fomba tsy mampino.
Ny rindranasa Unarchiver fisintomana rakitra dia nohavaozina ho amin'ny andiany 4.0
Raha manao ny lisitry ny rindranasa 10 izay hita indrindra amin'ny Mac isika, mety The Unarchiver no ...
iA Writer koa dia havaozina amin'ny tranomboky vaovao sy ny fanamboarana bibikely
Tamin'ny faran'ny volana Mey dia nahatratra ny fampiharana 5.0 an'ny mpanoratra iA Writer, ary tao anatin'ny fotoana fohy ...
iWork dia nohavaozina miaraka amin'ny endri-javatra vaovao amin'ny fampitahana matematika
Ny efitrano fiasan'ny biraon'i Apple, iWork, dia nahazo fanavaozana fotsiny, nanampy fiasa vaovao amin'ny Pejy, Nomery ary Keynote.
GIF Maker Movavi, tsy misy afa-tsy 1,09 euro
Misaotra ny fampiharana GIF Maker Movavi afaka mamorona GIF mahatsikaiky isika amin'ny alàlan'ny fandraisam-peo mivantana ny efijery fitaovantsika.
Forecast Bar - Weather + Radar, fampiharana feno indrindra hijerena ny toetrandro
Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Mac izay te-hahita ny toetr'andro amin'ny ...
Maodely maherin'ny 3.000 ho an'ny Microsoft Word ho an'ny 1,09 euro ihany
Raha tsy ampy famoronana ianao, ny môdely ho an'ny MS Word dia mety ho ilay fampiharana tadiavinao hamoronana rakitra.
Avadiho ireo rakitra amin'ny endrika PDF, PSD, Ai na EPS ho JPG, PNG ...
Noho ny fampiharana Creative Converter, afaka miova amin'ny endrika toa PSD sy Ai ho JPG, BMP, PNG ...
Fakan-tsary Retro, omeo mikasika efa taloha ny sarinao
Fampiharana ahafahantsika mamerina mamerina ny sary misy anay vitsivitsy ao amin'ny Mac App Store ary amin'ity indray mitoraka ity ...
Fafao sary, hamafa izay tsy tianao amin'ny sarinao
Fantatsika fa misy fampiharana vitsivitsy vitsivitsy izay manao an'io asa io amin'ny fanesorana antsipiriany, zavatra na tsy fahalavorariana aza ...
Microsoft Office 365 dia hamely ny Mac App Store alohan'ny faran'ny taona
Mandritra ny telovolana fahatelo amin'ny taona dia ho tonga ao amin'ny Mac App Store ny serivisy Office 365, araka ny nambaran'i Apple tamin'ny WWDC farany teo.
Arovy ny tenimiafina amin'ny fisie miafina ny rakitrao sy ny lahatahiry
Misaotra ny fisie Secret Folder dia afaka miaro hatrany ny fisie ataonay, lavitra ny prying maso sy ny famafana tsy nahy.
Aza adino ny mampiasa ireo rakitra vao nosokafanao tamin'ny Trickster
Misaotra ny fampiharana Trickster, afaka manana eo am-pelatanana hatrany hatrany ny rakitra rehetra nosokafanay, vao avy nisintona izahay, nanitsy ...
Pixelmator Pro dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao marobe
Pixelmator Pro dia nohavaozina miaraka amina fanitsiana marobe: borosy, hazavana, loko ary fanitsiana mahasalama, maro amin'izy ireo no avy amin'ny Touch Bar.
Artstudio Pro, novaina ary mampitandrina ny amin'ny kinova tsaratsara kokoa amin'ny volana Jona
Artstudio Pro dia fampiharana taloha ho an'ny macOS izay vao nahazo fanavaozana ny kinova 1.2.3. Ity vaovao ...
Fantaro amin'ny fotoana rehetra ny isan'ny tifitra avy amin'ny fakantsarinao SLR miaraka amin'ny ShutterCount
Ny fahafantarana ny isan'ny tifitra avy amin'ny fakantsary SLR dia ahafahantsika mahazo haingana ny hevitry ny fikaton'ny shutter, iray amin'ireo faritra lafo indrindra amin'ny fakantsary hanamboarana.
yAlarm, fampiharana fanairana ho an'ny Mac
Ity dia rindrambaiko fampandrenesana tsotra nefa tena ilaina ho an'ny Mac anay, fampiharana veteran izay ...
Sculptura, fampiharana vaovao ho an'ny sary sokitra amin'ny Mac
Misy karazana fampiharana rehetra ary amin'ity tranga ity dia manana fampiharana izay mifandraika amin'ny kanto kanton'ny ...
Timer, fampiharana vaovao "matihanina" ho an'ny Mac
Ny fananana fameram-potoana amin'ny Mac dia zavatra tsy anananay mahazatra ary azo antoka fa mpampiasa sasany ...
FL Studio (Fruity Loops) dia tonga tao amin'ny Mac 20 taona taorian'ny nanombohany
Ny rindranasa ampiasain'ny matihanina mozika, FL Studio, dia tonga teo amin'ny lampihazo Mac, 20 taona taorian'ny nanombohany.
1Password 7 ho an'ny macOS dia novaina ho an'ny kinova 7 miaraka amin'ny vaovao manandanja
1Password dia havaozina amin'ny andiany 7 miaraka amina zava-baovao kanto fa ny fisorohana hafa mba hialana amin'ny fampiasana sandoka sandoka.